Fanamboarana takelaka matevim-bovoka matevina China Manufacturer
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Business Type:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:11% - 20% Certs:ISO9001, RoHS, Test Report Description:Tafahoatra ny solaitrabe,Tapa-tsavoka fanesorana saribakoly,Tafio-peo eo amin'ny solaitrabe
Home > Products > Whiteboards Receptive Whiteboards > Fampitaovana mivadika ho fotsy > Fanamboarana takelaka matevim-bovoka matevina
Taratasy No. GCKP-NS50-PSA Whiteboard ho an'ny tenany dia karazana lavanila matevina amin'ny adhesive , mora tapaka, manify, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Noho ny adhesive matanjaka, dia mora mora ny fametahana kitay ary tsy hianjera mora foana . Toy ny kitapo akanjo, dia manana fanoratana am-boninahitra izy ary manala ny faharetany. Azo ampiasaina amin'ny karazana pen, ny marika dia mety ho maina ao anatin'ny iray volana. Toy ny andriamby mora mandray Whiteboard Sheet atao amin'ny fampifangaroana vy vovoka amin'ny plastika (CPE sns), dia manana fahafahana tsara andriamby vonon-kandray, attachable avoakan'ireo andriamby.
Hazo fotsy hoditra. Azo ampiasaina amin'ny marika manify maina, kilaometatra, azo esorina tsara.
Sarivongana mainty matevina lehibe ho an'ny Kitchen
Tafahoatra ny solaitrabe
Tapa-tsavoka fanesorana saribakoly
Tafio-peo eo amin'ny solaitrabe
Tetik'asa momba ny solaitrabe
Famafana maina sy solaitra
Tafahoatra ny solaitrabe Tapa-tsavoka fanesorana saribakoly Tafio-peo eo amin'ny solaitrabe Fanabeazana solaitrabe Fampitaovana mandrakotra ny solaitrabe Tetik'asa momba ny solaitrabe Famafana maina sy solaitra Sarin'ny solaitrabe